Tinye nkasi obi n'ụlọ gị nke nwere ogwe aja aja PVC 、 Ogwe mgbidi WPC Ihe ndị a bụ ozi gbasara ngwaahịa PVC / WPC anyị ： Ihe, PVC Taịl nile nke Taịlị: 1. A na-agbanyụ ọkụ ọkụ, anaghị enwu ọkụ. 2. Mee N'onwe Gị dị mma. 3. O n’enweghi mmasi site n’anu aru ma obu ogidi, onye ...
Kemgbe ụwa, ịchụso “ịma mma” nke ihe a kpọrọ mmadụ akwụsịbeghị. Laa azụ na ngwụcha oge a rue na mmalite nke narị afọ nke iri na asatọ, ndị Sweden a ma ama na ndị ọchụnta ego bara ọgaranya bidoro iji mkpuchi mgbidi dịka ihe ịchọ mma ime. Thedị ndị ahụ bụ mkpuchi mgbidi cashmere, mkpuchi Gobelin ...
Mgbe ị na-ejikwa ogwe mgbidi dị na mpụga na ibudata na ibudata ogwe mgbidi dị n'èzí, a ga-eji ogologo ogologo nke ogwe ahụ mee ihe dị ka akụkụ nrụgide, a ga-ejikwa nlezianya dozie ogwe ndị ahụ iji zere nkwekọrịta na mmebi nke ogwe ndị ahụ; Mgbe ị na-ejikwa otu mpempe akwụkwọ, a ga-akpali mpempe akwụkwọ ahụ ...
Ogwe mgbidi PVC bụ ezigbo nhọrọ maka ịchọ mma mgbidi. Nsonaazụ ịchọ mma zuru oke dị elu ma ọnụahịa dị ọnụ. Kwesịrị ịmụ ụfọdụ ihe ọmụma ọkachamara mgbe ị na-etinye, nke mere na ụlọ ịchọ mma nwere ike ịdị ngwa ngwa ma nwee ike ị nweta mmachi mma. Ka m ...